जिम नगई मोटोपन घटाउने यस्ता छन् ४ सरल उपाय
एजेन्सी। तौल बढ्ने समस्याले ग्रसित मानिसहरु मोटोपनलाई कम गर्न जिम जाने गर्दछन्। तर प्राय कम मानिसहरुलाई मात्रै जिम नगएपनि मोटोपनलाई कम गर्न सक्ने उपायहरु थाहा हुन्छ। मानिसको एउटा त्यस्तो उमेर हुन्छ जुन समयमा धेरै तौल भएका सामाग्री उठाउनु पनि स्वास्थ्यका…
फास्टफुड खाँदै हुनुहुन्छ, कपाल झर्नुकासाथै लाग्न सक्छन् यस्ता रोग
काठमाडौं। विश्व अहिले झनझन आधुनिक बन्दै गइरहेको छ। आधुनिकतासँगै मानिसको जीवनशैली पनि परिवर्तन भइरहेको छ। प्रतिस्पर्धाको दुनियामा मानिसहरुका लागि एक सेकेण्ड पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। यससँगै भागदौडको जीवनमा खानाको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ। स्वस्थ रहन स्वस्थ खानेकुराको आवश्यक पर्छ। तर आजभोली…
यसरी हटाउनुहोस् केही दिनमै गर्धन वा शरीरमा देखिएको कालोपना (विधिसहित)
हामी सबैलाई आफ्नो सौन्दर्य कायम राख्न मन पर्छ। कहिले काही हाम्रो गर्धन वा शरीरका विभिन्न भागमा देखिएको कालोपनाले हामीलाई चिन्तित समेत बनाउछ। खास गरेर गर्धन वा कुईना जस्ता भागमा कालोपना आउने गर्दछ। आज हामीले तपाईको शरीरमा देखिएको कालोपना हटाएर सौन्दर्य…
चितवन। उपचारका लागि आउने क्यान्सरका नयाँ बिरामीमध्ये १४ प्रतिशत भन्दा बढी नाक, कान र घाँटीका हुने गरेका पाइएको छ। बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल क्यान्सर रोकथाम तथा अनुसन्धान विभागले विश्व टाउको तथा घाँटीको क्यान्सर दिवसका अवसरमा बिहीबार चितवनमा आयोजना गरेको…
आँखाको ज्योति बढाउन खानुहोस् यस्ता खानेकुरा
आँखाको ज्योती राम्रो बनाउनु र घरेलु खानेकुराहरुमा ध्यान दिनु एकदमै आवश्यकता पर्दछ। पावरवाला चस्मा लगाउनेले त हामीले खानेकुरा नखाएपनि हुन्छ होला भनेर सोच्नुहुन्छ होला तर चस्मा लगाउनेले समेत यी खानेकुरा खानु एक दमै आवश्यक हुन्छ। दृष्टिमा सुधार आउन र आँखा…
प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेको मलेरिया परजीवी दक्षिण पूर्वी एशियामा फैलिँदै
बीबीसी । प्रमुख ‌औषधीहरूलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने मलेरियाका परजीवीहरू दक्षिण एशियामा तीव्र रूपमा फैलिएको ब्रिटेन र थाइल्याण्डका शोधकर्ताहरूले जनाएका छन्। त्यस्ता परजीवी कम्बोडियाबाट लाओस, थाइल्याण्ड र भियतनाम हुँदै फैलिएको हो। ती मुलुकहरूमा मलेरियाका आधा बिरामीलाई पहिलो छनौटको औषधी काम नगरेको…
उमेर नपुगी कपाल फुलेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपाय अप्नाउनुहोस्
काठमाडौं । के तपाइँको उमेर नपुगी युवा अवस्थामै कपाल फुल्ने समस्याबाट हैरान हुनुभएको छ ? छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस् त्यसलाई घरमै उपचार गर्न सकिने छ। कालो कपालले मानिसको सुन्दरता अझै बढाउँछ । तसर्थ युवा उमेरमै कपाल फुल्ने समस्याबाट छुटकारा…
यस्ता छन् बिहानै खाली पेटमा बीरे नुन पानी पिउँनुका अद्भुत फाइदा
आयुर्वेदका अनुसार बीरेनुनलाई आफ्नो आहारसँगै प्रयोग गर्नाले विभिन्न किसीमका रोगहरुबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । यसले मधुमेह , उच्च रक्तचाप, पेटसम्बन्धि समस्याहरुबाट छुट्कारा दिलाउँछ। किनकी यसमा ८० प्रकारको खनिज पदार्थहरु पाईन्छ । विहान बीरेनुनलाई पानीमा मिसाएर खानुभयो भने, तपाईंको स्वास्थ्य निकै…
यस्ता छन् ज्वानोका चमत्कारी फाइदा
ज्वानो तरकारी तथा अचारमा स्वादको लागि प्रयोग गरिने वनस्पति हो। यस लाई खाद्य विशेषज्ञले नेगेटिव कैलोरी फूड मा गणना गर्दछन। यो थोरै मात्रामा खादा पनि पेट भरिएको अनुभव गराउने हुनाले वजन घटाउन चाहनेहरु ले यसको झोल खाने गर्दछन। कम्मर दुख्ने…
क्यान्सर जस्ता खतरनाक रोगका लागि अमृत समान कालो मरिच
काठमाडौं । कालो मरिच सबै घरको भान्सामा उपलब्ध हुने एक प्रकारको मसला हो । तर हामीमध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ यो कालो मरिचले दिने फाइदाहरु । आज डिसीनेपाल तपाईंहरुलाई कालो मरिचबाट हुने फाइदाहरुका बारेमा जानकारी गराउँदै छ । अनुसन्धानले समेत…